Shiikh Shariif Maxaa Loo sheegay !
Gendisch. Nov 2008
Waxaa uu ka baxsaday muqdisho waqti haatan labo sano laga joogo , kadib markii ciidankii itoobiya oo taankiyadoodi wataa dalka soo galeen, waxaa cirka ka duqeeeyey duyuurahii America, kadib markii itoobiya iyo madaxwaynihii somaliya ku huwiyeen shaar argagixiso, hada waxaa uu yiri waan la heshiiyey dowlada xabad joojina waa soo socotaa , waa yaabe , heshiis ma xumee muxuu kula heshiiyey dowlada ! suaashaan iyo jawaabteeda waa mid aay la amakaagsan yihiin taageerayashii Maxaaakiimta iyo kuwa muqaawamada , miyaanahay ahayn inuu ummada ka gado waxa laga filan karo heshiiskaan Qar-iska tuurka ula muuqda soomali badan.
Waxaa Somali badan la tahay walina ugu muuqataa in sh. Shariif ka mid yahay ragga ugu roon Somalida dhinaca hogaaminta siyaaada , ha yeeshee waxaa ila tahay in xakameeyn la’aantii raggii ka mid ahaa maxaakiimta waqtigii uu maamulayeen muqdisho darteed ay keentay fashilkii ku yimid golahiii maxaakiimta ee la burburyey dabayaaqadii 2006 . Ragaaas oo maanta ah ragga ugu adadag ee ka soo horjeeda Kalana qaybiyey golihii maxaakiimta iyagoo la goa’ay qolooyin diiin lagu habaabiyey una soo jeeda leeynta shacabka , wax garadka ,dumarka iyo kuwo markii horaba aanay diintu dhab ka aheen oo dano qabiil iyo mid shaqsiyadeed waligood hoosta ku watay. Oo hadii aan hada la xakameeyn u keeni kara fashil kale.
Waxa warar la isla dhaxmaray sheegeen in Shiikh shariif uu si sir ah ula kulmay wasiirka arimaha dibada itoobiya ( siyoum Mesfin) oo ay ka wadahadleen in itoobiya ay goaan ku gaartay in ay dalka somaliya iskaga baxdo laakiin laga codsaday in meel la saaro ururka argagixo ee ka mid ururada uu hogaamin jiray. isla markaasna uu Ogolaado inaan dowlada ka dhalan doonta somaliya aanay faraha la oo galin arimaha gaar ah ee dalka itoobiya , lana shaqeeyaan sidii looga hor tagi lahaa in wadaada mayalka adag ka soo gudbaan xuduudaha somaliya . sheikh sharif sida la sheegayo waa uu ku gacan sayray, inuu itoobiya wax heshiis ah la galo inta ciidankeedu dalka joogaan , isla markaasna ay wado dibin daabyada shacabka soomaliyeed. Arintaas oo loo guuxay balse waxaa ay keentay shaki badan oo ku abuurmay hogaanka dib u xoreeynta somaliyeed, sida lagu aamini doono sheikh shariif hadii uu la kulmay itoobiyaan iyadoo cid og aysan jirin marka laga reebo Shariif Xasan sh. Aden oo isagu ahaa odaygii soo abaabulay isu imaadka oo ay dhexdhexaadinayeen safaarada ameerica ee Nairobi, Keenya. inkasta oo uu ka qanciyey arinkaas hogaamiyeyaasha dib-u-xoreenta oo qaarkood la yeegay in cisbitaalda loo qaaday markii ay maqleen warkaas ah in shariif xasan uu noqday ninka Gacanta ku haya Sh. Shariif sh. Axmed oo ah wadaad aad u dhorwsan . . Intaas kadib waxaa ay dowlada itoobiya u dhaqaaqay plan B iyo la in isku dayo in la rido dowlada uu hogaamiyo cabdulaahi yousef laguna bedelo , madaxwayne itoobiyaanka saaxiib la ah oo beesha reer muqdisho ka soo jeeda oo ay ugu horeeyaan , dr. Ali Maxamed geedi, Axmed Cabdisalan X. Aadan. Taas macno badan aan sameeynayn in cabdilaahi yousef oo amxaaro laga reebo oo nin reer muqdisho ah kabaha u qaado ajendaha itoobiya la yiraahdo, waliba waa mid ka qatarsan tii abdilaahi yousef/darwiish iyo Cabdi qaybdiid, Arintaas waxaaa markiiba gaashaanka u daruuray waxgardka soomaliyeed oo ay ku jiraan kuwa ka soo jeeda reer muqdisho, golaha baarlmaanka oo u qaybsmay sedex qaybood . siyaasiyiinka ugu muruqa roon ee dhinaca siyaasada barlamaanka , iyo Somali badan meel ay joogtaba iyagoo kaashanaya ku qaybsanaha qaramada midoobay ee soomaliya Walad Cabdalla Arintaas muujiyey diidmo adag, ay noqotay mid aan waxba ka soo naasacadaan oo itoobiyaanka qorshaahoodu ahaa markii ay qaban qaabiyeen shirkii igad ee nayroobi,
in kasta oo la isku raacsan yahay in Cabdilaahi yousef uu noqday hogaamiye aan hogaan lahayn , kana gudbiwaayey muran siyaasadeed, ficil qabiil, muqaawamo careeysan oo aan marna hore looga socon Karin. Waxa shaki ku jirin in Sh. Shariif loo sheegay wax wayn oo hadii uu muujiyo isku duba rid siyaasadeed inuu hanan karo hogaanka dalka. Hadii kasbado inuu taageero ka helo Shacabka soomaliyeed , tasoo reer galbeedka , wadamada carabka , kuwa deeqda bixiyaba , wadamda dariska ahba ay u arkaan inuu yahay hagaamiye ay la shaqeeyn karaan balse loo baahanyahay in muujiyo isku duba rid siyaasadeed oo uu ku hanan karo taageerada kuwa ka soo horjeeda , hadaba waa kuwee ku uu u baahayn yahay inuu taageeradooda raadiyo mase yahay mid ku dhiiran kara inuu noqdo nin u bareera , isku kalsoon fakirkiisa siyaasadeed.
Waxaa ugu horeeya shiikhu u baahan yahay Inuu hanto Beesha uu ka soo jeedo ee woqooyiga muqdisho iyo agagaarkeeda kuwaas ay jiraan firqooyin logooyo meel ula fadhiya loona baahan yahay inta uusan jowhaar ka tagin inuu martiqaado, lana tashado oo ay goaan meel isla dhigaan.
Inuu helo beelaha kale ee degan koofurta muqdisho intooda badan aanay ku adkaan doonin in ay raacaan hogaankiis hadii ay dhinac joogaan Sh. Cabdirahmaan Janaqoow iyo Sh. Cabdilaqaadir Cali Omar, marka laga reebo xoogaa oo ku xiran sh. Daahir aweeys iyo hogaanka Yousef indhacadde Inkastoo uu aflagaado badan geeystay oo hadii uu martiqaado wada tashina ee la sameeyo keeni kara isu soo dhawaasho siyaasadeed.
Inuu hanto una socdaalo degaanda Hiiraan una yeero kuwa Galgaduud si uu meel la isula soo dhigo inaay yihiin kuwo hoos yimaada maxaakiimta il gaar ah ku haaya kuwa dadka leeynaya, airport xiraya , Saraakiisha qaramada midoobay gumaadaya , iyagoo ugu gabanaya magaca diimeed , mid qabiil iyo mid siyaasadeed intaba
Marka uu intaas isku duba rido waxaa uu u baahan yahay inuu raadiyo taageerada Hassan turki iyo abuu mansuur oo aritoodau adkaan doonto laakiin aan maanta looga maarmin in tix gelin la siiyo.
Inuu garto in isku dubadaridkiisa siyaasadeed uu aad u hooseeyo tan markii ragii la socon jiray qaarkood casmara u beeyreen, qaarkalana ah dibaadi ka noqdeen sidaas darteed uu dar dar geliyo isku xirka ummada soomaaliyeed meel ksta ay joogto , xiriirna la someeyo somaalida dibada joogta gaar ahaan ameerika , yurub, Dubai, kana dhaadhicyo fikirkiisa siyaasadeed taasoo ah jidkii ay qaadeen hogaamiyeyaal kale oo isaga ka horeeyey side Ismaacill jimcaale , Xashi wheelie waqtigii ay ku jireen halgankii lagu aafoobay sameeyey isku xir siyaaso.
Waxaa shaki ku jirin markra uu intaas maxsuulkeeda helo inuu noqonkaro hogaamiye aan la loodin Karin oo salka ku haya culeeys siyaasadeed qof haystaa aanu jirin cidna aan Qatar galineeyn danoohooda siyaaso , ,dhaqaale iyo degaan intaba. Waxaase sidoo kale sheikh shariif u baahanyahay inuu ka foo jignaado arimo badan oo sumacadiisa wax u dhimi kara oo aan loo baahneeyn in uu goaankeeda qaato isagoo aan la tashiyo badan la sameeyn taageerayaashiisa dhinaca siyaasada oo isku jira wadaado , aqoon yahayano iyo rug cadaa badan oo siyaasadeed . waxaa talooyinkaas ka mid ah
In uusan marna ogolaan ka qaybgalka dowlad uu cabdilaahi yousef hogaamiyo ama uu madaxwayne ka yahay.
In ciidanka itoobiya oo xamar jooga aanu marka isku dayin inuu yiraahdo xabad ha la joojiyo ama heshiis la saxiixdo itoobiyaan, taasoo fursad siineeysa kuwa ka soo horjeeda oo hada arintoodu ay cabur siyaasadeed ku jirto .
In uu xoogaa iska ilaaliyo inaanuu qofna jeebka u galo, oo uu noqdo nin dadka u dhexeeya gaa’aan qaadashadiisuna tahay biya kama dhibaan ( go’aan adag ) tasoo hadii aanu lahayn ga’aan qadasho keeni doonta inuu noqdo hagaamiye jilicsan oo aan la isku haleeyn Karin. Ugu danbeeyn
Waxaa loo baahna yahay inaanuu marna aaminin cadowga qaranka soomaliyeed iyo midka islaamka, balse dan siyaasadeed ku shaqeeyo ( political Game player) , sidoo lakana aanu marnaba u tanaasulin wax dhaawac gaarsin kara , sida labada arimood oo saldhiga u ah hogaan islaam oo suuban, diintiisa iyo qaranka soomaliyeed.
Hussein abdikarim ahmed –Gendisch
Rolesviile , NC, USA